Siyaasiga C. C.Shakuur oo ka hadlay Kulankii uu la Qaatay Khayre oo Raali gelin siiyey | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Siyaasiga C. C.Shakuur oo ka hadlay Kulankii uu la Qaatay Khayre oo Raali gelin siiyey
Muqdisho ( Kalshaale ) Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka hadlay kulan uu Caawa la Qaatay raysal wasaarihii Hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre.
Wuxuus heegay inuu khayre raaligelin kasiiyey Weerarkii ay Xukuumaddu Horay ugu qaaday Hoyga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo khasaare dhaliyey.
Ugu dambayntii wuxuu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur in siyaasiyiinta kale ee Arintaas lugta ku lahaa ay u fura tahay Fursadan oo kale.
“Waxaa caawa xarunta Xisbiga Wadajir nagu soo booqday Raysalwasaarihii hore ee Soomaaliya, ahna musharax madaxweyne Md Xasan Cali Kheyre. Kheyre wuxuu cudurdaar iyo raali gelin ka bixiyey weerarkii 17 Dec 2017.
Waxaan ugu baaqaynaa masuuliyiinta kale ee dawlada ee weerarka ku lug lahaa in ay fursadan oo kale weli u furan tahay.“
Labadaan ninba waa laba daanyeer oo caqli laheeyn. Been iyo munaafaqnimo ayeeyna isku sheegeen.
Weerarkii lagu qaaday Abdirahmaan Abdishakuur iyo mooryaantiisa waa eey saxsaneeyd, oo sharciga iyo kala danbeeynta iyo dowladnimada ayuu kasoo horjeeday daanyeer Abdirahmaan Abdishakuur sida eey u badanyahiin reerkiisa Ceeyr ee aanan caqliga badan laheeynba.
Now, Kheeyre hadeer tilaabo sax aheeyd markii hore waxa uu u leeyahay qalad ayeey aheeyd waa isaga oo uu Farmaajo miisla lagadiyay oo uu si sharci darro ah 7 daqiiqo u raacdeeyay, isagana uu buuq la’aan si doqonnimo ah albaabka uga baxay Kheeyre. Therefore, hadeer waa is xulafeeysi ku dhisan caqli xummo iyo munaafaqnimo qabiil. Photo-op kaan, iyo igu sawirkaan uu lagalay Abdirahmaan Abdishakuurna waxna uma soo kordhinaya walaahi, wax ayuuba kasii dhimaya oo dadka caqliga leh waa fahmi karraan ujeedada. Waxeeyse aheeyd, sida uu Abdirahmaan Abdishakuur sharciga u jabiyay ayuu daanyeer Farmaajana sharciga u jabiyay markii uu raacdeeyay daanyeer kheeyre, markaa waxaa la rabbay in uu sharciga ku taagnaado daanyeer Kheeyre, oo uu ku dhaho Farmaajo, adiga ayaa baxaya, oo qabiil ayeey dowladda dhexe ku dhisan tahay, mana i raacdeeyn kartid.
Irony, ayaa waxeey tahay, Farmaajo iyo Abdirahmaan Abdishakuur waa isku dhaqan, oo labadooda reer, Ilkayar iyo Ceeyr waa qaswadayaal fashilmay. Waxeeyna hadeer tahay in Farmaajo laga qabto dalka, oo sharciga iyo burburinta dowladnimada Somaliyeed uu ku haayo laga celiyo oo la raacdeeyo.
War khayre wuxuu wataa train intercity ah oo aad udheereeya waaba lacelin la, yahay anigu waxaan iri khayre final waa gaarayaa wuuna guulaysandoona hada kahor nin la oran jiray cilmi nuur tareey oo murursade ahaa oo saraakiishii hore ahaa aun wuxuu yiri siyaad baroow October October ayaad baratee hadaan mar dhow cagaha wax laga dayin kkkkkkk hada hiraab hiraab ayay baratee hadaan maalinta doorashada kabtay ma aragtay aysan ka dhicin markuu igaar herediid ah ku habsado hogaanka. Wallee reerkii daarood ahaa iyaguna kursigii ugu sareeyay waa ka quusteen kkkkk